IINDAWO EZI-7 ZE-EROGENOUS UBUKHE WAKHATHALELA INDLELA KUDE KAKHULU - NGESONDO
Iindawo ezi-7 ze-Erogenous ubukhe waKhathalela iNdlela kude kakhulu
Eyona / Ngesondo
Ifoto nguNadya Lukic / Getty Izithombe
Xa kuziwa kwisini esikhulu, eyona ndlela yakho yokuphela kufaneleka ukuba ngumlilo ngokuqinisekileyo yeyona inqabileyo. Kwaye indawo yakho yokumisa efanelekileyo: ezi zixhaphakileyo, zihlala zilityelwe, nokuba ziyimimandla emangazayo. Ayisiyongxaki yokuba uninzi lwezi zinto zilapho imizimba yethu ibambe khona uxinzelelo. Uxinzelelo yenye yezona zinto zibulala abantu ababhinqileyo, 'utshilo uEmily Morse, ugqirha wezesondo kunye nomninimzi Ukwabelana ngesondo noEmily ipodcast. 'Ukuba uyazikhetha kwaye unikele ingqalelo kwezi ndawo, uya kuqala ukuziva unoluvo oluya kuguqulela kwamanye amalungu omzimba wakho.'
Funda kumephu wendlela yakho wokuvula iipokotho ezintsha zovuyo-kuwe nakwiqabane lakho.
Ifoto ngu-Puhlmann Photography / Getty Izithombe
Awudingi ukuba sikuxelele ukuba ulungiso olulungileyo lweenyawo lunokususa usuku olubi. Inokuba yinto enkulu evulekileyo yamadoda nabasetyhini, njengoko amanqaku oxinzelelo kwiinyawo zakho enokubangela ukuvuka. Yenza okuninzi kule ndawo ishushu ngokuthi uthontsize ioyile yokuthambisa kwimithambo yoxinzelelo kwaye uqale ucinezele kwiipads zeenyawo, uhambisa iminwe yakho ngokunyusa phezulu. Emva koko qhubela phambili kwiinyawo kunye namaqatha-apho uya khona ukusuka apho kuye kuwe.
Ifoto ngePhepha lePhenyane lokuYila / imifanekiso kaFetty
Ngokuqinisekileyo ugcina iincam zeminwe yakho zokuchukumisa abanye, kodwa bakhaya kwitoni yokuphela kwemithambo-luvo ngokwabo. 'Lelona candelo lomzimba libuthathaka emva kolwimi,' utshilo uMorse. Ukuba ubakhethe bodwa ngokuzihlikihla kunye nokuzixova, oko kudala amava avuselelayo agxile kumandla akho engqondo kwinto ezayo. Bayaphendula ekukhanyeni okuchukumisayo njengokuxubha ulwimi okanye amazinyo, ngelixa amacala naphakathi anokuphatha ukubamba okuqinileyo.
Nentloko enesihlwitha yohambayo
I-scalp yakho ityebile kwiziphelo zemithambo-luvo, kwaye ukuhlala kwisiphelo se-scalp massage kunokukhulula uxinzelelo kunye nokwandisa ukuhamba kwegazi, ngaloo ndlela ukhukhumezele umzimba wakho ngamahomoni aqinisekileyo njenge-dopamine kunye ne-serotonin. UMorse ucebisa ukuthatha ithuba le-scalp enovakalelo ngelixa uhlamba kunye. Gxila ekuhlikihleni ishampu entlonzeni, kwaye unike ingqalelo iqabane lakho-uya kwazi ngokukhawuleza ukuba ukwindlela elungileyo.
Thetha ngendawo eshushu obungazi ukuba unayo. Umzimba wethu unakho ukonwaba kwiindawo ezininzi ezinje, kwaye siyatsiba, utshilo uMorse. Melana nomnqweno wokutsiba kwaye uvumele iqabane lakho liphuze, liphulule, okanye limthambise kamnandi emva kwedolo. Ulusu ngasemva lubhityile, lukunika ukufikelela kwiziphelo zemithambo-luvo ezingakumbi.
Ixesha lokususa loo nto ungasichukumisi isisu sam! Into esiyenzayo sonke: ukubamba okanye ukuphulula isisu kukhulu kakhulu, ngakumbi kubafazi. Izihlunu zakho ze-ab ziqhagamshelwe kwimisipha yakho yelungu lobufazi, kwaye ukubetha okuthambileyo kunokubangela ukuba uthengise ezo zihlunu kulindelo, ekugqibeleni zikonyuse ukuvusa kwakho kwaye zikhokelele kuvuthondaba, utshilo uMorse. Kwaye, inyusa ulindelo lokuba uqhubeka ngokuqhubekeka nokuya emzantsi, engazange ibe yinto embi.
Ifoto ngu-laflor / Getty Izithombe
U-Gomez Addams wayekwinto ethile: ukuxubusha kunye nokubetheka okungaphakathi kwezihlahla kunokuvula zonke izivamvo zakho. 'Phantse inyani yokuba umntu ade acinge ukukuchukumisa apho,' utshilo uMorse. Ukuba ucinga malunga nokubekwa phambili, thatha indlela entsha ngokuziphulula okanye ngokutyisa kancinci izihlahla ngeminwe okanye ngolwimi. Uninzi lwamaqabane ngekhe luye lwangena kule ndawo, ukuze into eyothusayo eyongezelelweyo ikwazi ukwenza ukuba izinto zihambe, nazo.
Xa uphuza, iqhuba i-dopamine kwingqondo yakho-sonke esona sizathu sokukhotha, ukubamba, kunye nokuthinta imilebe yeqabane lakho. 'Ukwanga yinto yokuqala ehamba nobudlelwane bexesha elide,' utshilo uMorse (funda indlela yokugqobhoza ngaloo ndlela, kunye I-7 iirutsu zesini eziqhelekileyo ). 'Akukho nto ingcono kuneseshoni eshushu eshushu!' Amathe aqukethe inqwaba yehomoni yesini testosterone, ke akukho sigwebo apha ukuba ukhetha ukwanga kwakho kwicala le-sloppier.
Indawo efanelekileyo yokufumana umkhuhlane
qhubeka ubona 555
Uhlala ixesha elingakanani umkhuhlane we-covid
kulungile ukutya ikhephu
loluphi umthambo otshisa awona manqatha asesiswini?
indlela yokubulala iimpukane endlwini yakho